Kudya Kugadzirira, zvakanakira kuronga menyu svondo | Bezzia
Kudya Kugadzirira, iwo mabhenefiti ekuronga menyu yevhiki
Toñy Torres | 10/09/2021 14:00 | Matipi ehutano
Kuronga menyu yevhiki nevhiki ndiyo nzira yakanakisa yekudzora zvaunodya, maitiro aunozvidya uye nenzira yaunozviita nayo. Ndizvozvo, ndizvo iyo nzira kwayo yekuona kuti kudya kwako kwasiyana, yakaenzana uye ine hutano. Asi pamusoro peizvi, kune zvakawanda zvimwe zvakanaka zvekuronga kudya kwevhiki. Nekuti kudya zvakanaka hakupesane nekuva nehupenyu hwakabatikana.
Nguva chinhu chinoshomeka uye nekudaro zvakakosha kuti uzive kuti unganakirwe sei nenzira yakanaka. Kutambisa maminetsi zuva rega rega kufunga nezve zvekubika chinhu chinoita kuti iwe urasikirwe nemukana wekudyara nguva yako mune zvimwe zvinonakidza zvinhu. Naizvozvo, hapana chinhu chakasununguka uye chinoshanda kupfuura ipa zuva rimwe chete pasvondo kuronga menyu yevhiki.
1 Chii chinonzi "chikafu chekugadzirira"?
1.1 Zvakanakira kuronga uye kubika zuva rimwe chete pasvondo
Chii chinonzi "chikafu chekugadzirira"?
Kuronga zvekudya zvevhiki zvakajairika, asi kumwe kunhu (kunyanya muUnited States) mumwe munhu akafunga kuti kubika, kana semi-kubika chikafu, kunogona kubatsira kuchengetedza nguva mukicheni zuva rega rega. Uye ndomaitiro ekuti izwi rekuti "kudya kwekugadzirira" rakapinda muhupenyu hwedu, zvinoreva kuti kugadzirira chikafu. Chaizvo, inzira yekuronga uye yekugadzirira chikamu chekudya kwevhiki rese.
Zvekuti iwe unogona kuchengetedza yakawanda nguva mukicheni, pamwe nemari pazvinhu zvevhiki nevhiki uye dzivisa yakawandisa chikafu chikafu chisina kudyiwa. Asi pfungwa "yekugadzirira kudya" inoenderera mberi, sezvo isiri yekugadzira menyu kana kusiya zvimwe zvakabikwa. Iyo yakazara nzira iyo inosanganisira anotevera matanho:
Ronga menyu yevhiki nevhiki pamberi, uchifunga nezvekudya kwega kwega kwezuva pamwe chete nezvikafu zvishoma.
Tenga chaizvo chikafu chaunoda, kudzivisa kutambisa zvigadzirwa. Pamusoro pekugadzira imwechete kutenga kwevhiki rese, kwaunotenga zvese zvaunoda pane zvese zvekudya.
Tsaurira nguva yakatarwa svondo rega rega yekubika, nemaawa maviri kana matatu anokwana nesangano rakanaka.
Gadzirira zvimwe zvinowedzera Zvekudya zvakaita semuriwo nemiriwo izvo zvinofanirwa kunge zviripo pakudya kwese. Ndokunge, kutema miriwo muhuwandu kuti ive nekuwanikwa nguva dzose.
Govera zvikamu zvacho mumidziyo yakakodzera, ine saizi chaiyo yekupedzisa kudya nezvakakosha zvinovaka muviri.
Chengetedza nemazvo mufiriji mukati mevhiki.
Zvakanakira kuronga uye kubika zuva rimwe chete pasvondo
Hapana chinhu chinoshoresa sekudzoka kumba kubva kuzuva rakareba kubasa uye kugadzirira chikafu. Izvi ndizvo chaizvo zvauri kuzodzivisa ne "kudya kwekugadzirira" nekuti unogona kuvhura firiji uye uwane chikafu chakagadzirwa zvakagadzirwa nguva dzese. Uye zvakare, nekuve nezvikamu zvakaenzana zvakapatsanurwa, iwe unotora mugove wakakodzera uye unodzivirira kudya zvakanyanya.
Kana iwe usati wanyatsogutsikana nazvo iwo akawanda mabhenefiti ekuronga yako yevhiki menyu menyu yekudya, cherekedza zvese zvakanakira kudya kwekugadzirira.
Unochengetedza mari. Nekuti iwe unotenga kamwe chete kwaunowana zvese zvaunoda. Zvinotaridza kuti kuita akati wandei kutenga zvidiki zvakanyanya kudhura, nekuti nguva dzose vanotora zvinhu zvakawandisa kupfuura zvakafanira.
Iwe zvakare chengetedza nguva. Muzuva rimwe chete uchave nechikafu chevhiki rese chakagadzirwa uye chakakamurwa kuita midziyo yakagadzirira kushandira.
Unoziva zvaunodya nguva dzose. Kana iwe uine chikafu chakagadzirwa mufriji, zvinokutengera iwe zvakanyanya kuwira mukati muyedzo wekuodha chikafu chinokurumidza.
Unodya uine hutano. Kuzadzisa iyo yapfuura poindi, uine chikafu chako chakagadzirwa ne zvisikwa zvipenyu unodya zvirinani uye uine hutano.
Chikafu chidiki chinotambiswa. Chinhu chinofanirwa kudzorwa mune yega yega imba, nekuti iyo chikafu chekudya Izvi zvinovhundutsa tichifunga kuti vanhu vazhinji vari kushaya chikafu mumatunhu ese epasi. Zviwanikwa zvishoma uye chikafu hachifanirwe kutambiswa chero zvodini.
Iwe watoona iwo mabhenefiti mazhinji ekuronga chikafu pamenyu vhiki nevhiki, saka iwe unongofanirwa kutora pepa rakanaka, pepeni rako raunofarira wotanga kuronga. Iwe uchakurumidza kuona kunakidzwa kwekuve wakarongeka chikafu panguva dzese uye kunyange, muviri wako unozviona nekuzvikoshesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Kudya Kugadzirira, iwo mabhenefiti ekuronga menyu yevhiki
Ikea fenicha hacks ine rack kana cannage
Iyo trend accessories izvo zvatove kubudirira